Igbe / Katọn na ndị ọzọ n'elu igwe Labeling Machine Manufacturers & Suppliers - China Box / Katọn na ndị ọzọ Surface Labeling Machine Factory
① FK811 dabara maka ụdị nkọwa ọ bụla igbe, mkpuchi, batrị, katọn na mgbe niile na ewepụghị isi ngwaahịa labeling, dị ka nri nwere ike, plastic cover, igbe, ihe egwuregwu cover na plastic igbe ekara ka akwa.
② FK811 nwere ike nweta akara mkpuchi mkpuchi zuru oke, akara njiri mara nke ọma, akara multi-labelụ kwụ ọtọ na akara akara multi-labelụ kwụ ọtọ, nke a na-ejikarị na katọn, elektrọnik, awara awara, nri na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa.
① FK618 dabara maka ụdị nkọwa ọ bụla square, ewepụghị, obere curved na oge na-adịghị ngwaahịa elu nkenke na elu overlap labeling, dị ka eletrọnịkị mgbawa, plastic cover, ịchọ mma flat bottler, toy cover.
② FK618 nwere ike nweta akara mkpuchi mkpuchi zuru oke, akara ngosi ziri ezi, nke ejiri ya na elektrọn, ngwa siri ike, nkwakọ ngwaahịa, ịchọ mma na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa.
③ Igwe na-ede aha FK618 nwere ọrụ ndị ọzọ iji gbakwunye nhọrọ: enwere ike ịgbakwunye igwe mkpuchi teepu na-adaba agba agba na isi akara, enwere ike bipụta ogbe mmepụta, ụbọchị mmepụta na ụbọchị njedebe n'otu oge.Belata usoro nkwakọ ngwaahịa, kwalite nrụpụta mmepụta nke ọma, ihe mmetụta akara pụrụ iche.
FK839 Automatic Bottom Production Line Labeling Machine nwere ike dakọtara na ahịrị mgbakọ iji kpọọ ngwaahịa na-asọpụta n'elu elu na elu gbagoro agbagọ iji ghọta akara ntanetị enweghị mmadụ.Ọ bụrụ na ọ dakọtara na eriri nnyefe koodu, ọ nwere ike ịkpọ ihe ndị na-asọ asọ.Mpempe aha dị elu na-egosipụta ịdị mma nke ngwaahịa ma kwalite asọmpi.A na-eji ya na nkwakọ ngwaahịa, nri, ihe egwuregwu ụmụaka, kemịkalụ kwa ụbọchị, ngwa eletrọnịkị, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Awụnyere n'okpuru ahịrị mgbakọ, na-ede aha n'elu ụgbọ elu ala na cambered elu nke ihe na-asọ asọ. Nhọrọ inkjet igwe na-ebufe iji bipụta ụbọchị mmepụta, nọmba batch, na ụbọchị nkwụsị tupu ma ọ bụ mgbe akara.